Daawo Sawirada soo dhoweynta Madaxweyne Faroole ee magaalada Boosaaso. – Radio Daljir
Daawo Sawirada soo dhoweynta Madaxweyne Faroole ee magaalada Boosaaso.
Nofeembar 29, 2012 5:39 b 0
Boosaaso, Nov 29 M/weynaha Dawlada Puntland C/ramxaan Faroole ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, iyadoo lagaga hortegey meel ka baxsan magaalada Boosaaso.
M/weynaha oo salaan ka qaatay ciidanka Baanbayda ee Puntland ayaa loo gelibiyey aqalka Madaxtooyada halkaasoo uu kula hadlay saxaafadda, Wuxuu ka hadlay arimaha amaanka, dhaqaalaha, iyo Siyaasadda Puntland.
Shir looga hadlay dayactirka garoonka diyaaradaha C/laahi Yuusuf oo maanta Gaalkacyo dhacay.
Madaxweynaha maamulka Khaatumo oo guul ka sheegtay dagaalkii shalay ka dhacay Xudun (Dhegayso).